Feno ™: Varotra an-tsisintany miampita avy amin'ny fandikan-teny, fiantsenana, hatramin'ny alàlan'ny fanatanterahana | Martech Zone
Feno ™: Varotra an-tsisintany avy amin'ny fandikan-teny, fiantsenana, hatramin'ny alàlan'ny fanatanterahana
Talata, Jona 13, 2017 Alahady, Desambra 24, 2017 Douglas Karr
Tony Bianco's volavola efa notadiavina fatratra tao Aostralia nandritra ny efa-polo taona mahery, ary ankehitriny ny marika dia nanjary saribakoly lamaody nalaza indrindra manerantany sy lisitr'akanjo tsara indrindra nasehon'ny modely aostralianina. Androany, olo-malaza sy maodely ambony marobe any Etazonia sy eran'i Eropa no hita mitafy kiraro sy kojakoja isan-karazany Tony Bianco.
Mba hanampiana ny fanafainganana ny fanitarana iraisampirenena sy ny fangatahana sisintany, Tony Bianco dia miara-miasa amin'i Pitney Bowes mba hanomezana traikefa fiantsenana an-tserasera an-tsokosoko ho an'ny mpanjifa manerantany miaraka amin'ny Pitney Bowes Vahaolana feno Cross-Border.
Ankehitriny Tony Bianco dia afaka manatona ireo tia kiraro erak'izao tontolo izao ary mamela azy ireo handoa vola any an-toerana miaraka amin'ny vidiny feno izay azo antoka - ka tsy misy tsy ampoizina amin'ny fandefasana azy. Ny mpividy eran-tany dia mahazo ny kiraro manampy azy ireo hisongadina ary ny marika fanta-daza an'i Tony Bianco dia lasa malaza manerantany.
Tena ilaina ny dian-tongotra manerantany. Manana fangatahana erak'izao tontolo izao izahay ary mila mitondra ny kirarony sy kojakoja amina vondrona tsena maro karazana. Amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Pitney Bowes, afaka mivarotra amin'ny mpiantsena any amin'ny firenena sy faritany 150 mahery izahay ary ny haitao farany azy ireo dia manome traikefa tsy misy tohiny ho an'ny mpanjifanay. Adam Bianco, Tale, Tony Bianco
Ny vahaolana mamaky an'i Pitney Bowes dia misy ao anatin'ny Cloud Cloud Commerce Pitney Bowes, mpandraharaha ara-barotra, manome fidirana amin'ny vahaolana, Analytics ary ny API manerana ny fitohizan'ny varotra feno haingana sy haingana.
Ny fahaiza-manao Cross-Border dia misy
Fitaovana fitakiana fangatahana - Pitney Bows dia afaka manome ny zava-drehetra manomboka amin'ny fikarohana ataon'ny mpanjifa ka hatrany amin'ny fanentanana ara-barotra eo an-toerana, mamela ny orinasanao hiditra ao amin'ny tahirin-kevitr'ireo mpiantsena sisin-tany ary handray anjara amin'ny programa marketing izay mampiasa fantsona eo an-toerana toy ny sosialy, fikarohana ary fiaraha-miombon'antoka amin'ny fampandehanana ny varotra mitombo sy fampirantiana marika.
Fametrahana toerana eo amin'ny tranokala - Ny teknolojian'ny fananana Cross-Border dia mametraka ny tranokalanao any amin'ny firenena 220 ho an'ny fanatsarana ny fanovana ny mpanjifa. Tafiditra ao ny fandikan-teny, ny fampiroboroboana ny vola sy ny firenena ary ny vidin'ny vokatra. Tsy ilaina ny mandany vola fanampiny hananganana sy hikolokoloana ireo tranokala na hampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa ho an'ny fitantanana lisitra.
Ny vidin'ny tany sy ny fanarahan-dalàna - Amin'ny fisafidianana an'i Pitney Bowes ' Voavidy vola Safidy (DDP), hanome fanazavana mazava ho an'ny mpanjifanao ianao amin'ny alàlan'ny fanomezana adidy sy haba azo antoka alohan'ny fizahana tsy misy tsy ampoizina COD aorian'ny fandefasana. Pitney Bowes dia manome isa sy manisa ny katalaogin'ny vokatrao, mametra ny toerana azo ampiharina, mandritra ny fikirakirana ny asa rehetra mifandraika amin'ny fanarahan-dalàna.
Vola sy risika - Pitney Bowes dia manolotra safidy safidin'ny fandoavam-bola manerantany sy eny an-tsena ary manompo amin'ny maha mpanondrana firaketana an-tsoratra sy antoko lehibe mahaliana azy. Ary toy ny Mpivarotra firaketana (MOR) izy ireo no mitantana ny fikirakirana ny fandoavam-bola sy ny fitantanana hosoka rehetra, misisika ny mpanjifany amin'ny trosa ratsy sy chargebacks.
Fitantanana lojika - Aorian'ny fiomanana ny fonosanao ho an'ny fandefasana iraisam-pirenena ao amin'ny foibe fanodinana trano any Pitney Bowes dia atolotra ireo mpitatitra kilasy tsara indrindra ao anatin'ny tambajotran'izy ireo. Izy ireo dia manampy amin'ny fanafoanana ny ahiahin'ireo mpanjifa manodidina ny fahasarotana sy ny vidiny mifandraika amin'ny fiverenana amin'ny alàlan'ny fitantanana sy fanamarinana ireo entana naverina tamin'ny foibe fandefasana entana manerantany. Manolotra fiarovana parcel ihany koa izy ireo ary manome fitaovana ho an'ny fanarahana fonosana mora.
Fikarakaran'ny mpanjifa - Omeo hery ny solontenan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa hanomezana fanohanana avo indrindra amin'ny fitaovana Consulate Pitney Bowes ', fampiharana serivisy ho an'ny mpanjifa mifototra amin'ny tranonkala hamaly ireo fanontaniana mifandraika amin'ny filaminana sy ny fanarahan-dia avy amin'ireo mpanjifanao iraisam-pirenena. Ny ivon-toeram-piantsoany 24/7 dia misy fiteny 15 azo ampiasaina hanampiana ireo olana sarotra kokoa rehefa mipoitra izy ireo.
Fanohanana mitohy - Ny ekipan'ny fiankinan-doha natokana ho an'i Pitney Bowes dia vonona hanome ny fanampiana ilainao amin'ny fampivoarana ny asa, ny fanaovana tatitra, ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana, ary ny famakafakana, ny fanontanian'ny mpanjifa, ny fitantanana ny tambiny ary maro hafa. Miaraka amin'ny lisitry ny mpanjifa mitombo mihoatra ny 300 ny mpivarotra, Pitney Bowes dia manana ny traikefa sy ny fahaiza-manao ilainao handehananao am-pahombiazana manerantany.
Tags: Cloud CommerceCompleteCross Borderfitakiana fitakianavarotra manerantanysehatra varotra manerantanyserivisy ho an'ny mpanjifa manerantanyecommerce manerantanyfahatanterahana manerantanylozisialy manerantanyfandoavam-bola manerantanyfanampiana manerantanyfandikan-teny manerantanyecommerce iraisam-pirenenafanatanterahana iraisam-pirenenalogistics internationalfandoavam-bola iraisam-pirenenavarotra iraisam-pirenenafanatontoloanaLocalisationfitantanana ny logisticsPitney Bowestony biancolocalisation tranonkala
Fahafantarana ny filàn'ny mpanjifanao amin'ny Préductive Analytics